Södertälje oo ka hortageysa dhallinyarada ku biirta burcada - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Södertälje oo ka hortageysa dhallinyarada ku biirta burcada
La daabacay torsdag 9 augusti 2012 kl 14.21
Degmada Södertälje ayaa hirgelisay mashruuc ay uga hortagayso in dhallinyarta degmadaas ku biiraan kooxaha borcada abaabulan. Tan iyo markii uu xukun ku dhacay 18 kamid ahaa burcada abaabulan ee ka jirta degmadaas ayaa si weyn waxaa hoos ugu dhacay faldenbiyeedyada ka dhici jiray degmadaas. Mashruucaan ayaa looga gol leeyahay in aysan mar danbe degmada sal-dhig ku yeelan kooxa geysta faldenbeedyada abaabulan.
- Mashruucaan ayaa ah mid ay dowladda howl u siisay golaha sare ee booliska, hadafka laga leeyahay mashruca ayaa ah ugu horayn inlaga hortago dhallinyarado in ay kamid noqoto kooxa burcadaa, hadafka kalana ayaa ah in gacan loo fidiyo dhallinyarta rabta in ay ka baxdo kooxa burcadaa, ayey tiri Rose Marie Lundkvist oo madax uga ah hay'ada bulshada ee degmada Södertälje.
Hadaba siidii looga hortagi lahaa in dhallinyarado ku biirto kooxa burcadaa ayaa mashruucaan waxaa wada shaqeynaya hay'ada dowligaa ee kala gadisan sida booliska iyo hay'ada arimaha bulshada ee socialentjänsten. Hay'ada bulshada ayaa mashruucaan shaqaalaysiisay labo qof dheeraad ah si ay si gooniya ula socdaan dhallinyarada qatarta ugu jira kamid noqoshada burcada. Rose-Marie Lindqvist iyo mar kale.
- Waxaan hada howl-gelinay labo qof oo ku howlanaan doona arimahaaan, kuwas shaqo bilaabi doona asbuuca soo socda, laakin shaqaalaheena caadigaa ayaan mar horeba ku howl-galnay oo ku bilownay in aan xiriir la samayno kuwo xabsiyada iyo xarumaha lagu xanaaneeyo laga soo daayo una sheegnaa in aan ku casumayno nolal kale oo ka gadisan mida burcadnimada ah aye tiri.
Degmada Södertälje ayaa waxaa waqti dheer gacan ba' an ku hayey labo kooxood oo ah burcad abaabulan. Kadib markii ay degmadas ku soo bateen dilalka qorshaysan iyo handadaad loo geysanayo ganacsatada yaryar ee degmada ayaa olale ay qaadeen Booliska iyo xeer-ilaalintaba ku soo qabqabteen labaatameeyo lagu eedeeyey in ay ka tirsanyahiin burcada abaabulan. Asbuucii hore ayey maxkmada Södertälje xukuno kala gadisan ku riday 18 kamid ah dadkii la soo qabqabtay. Qabqabashada iyo xukunada ayaa saameyn ku yeelatay falakii burcadnimada ahaa ee ka dhici jiray degmadaas sidaas waxaa sheegaya Bengt Jansson oo madax u ah qaybta denbibaarista booliska Södertälje islamarkaana qaabilsan ka hortaga dhallinyarta qatar ugu jirta in kamid noqodaan burcada.
- Falalka denbiyaadaa aad ayey hoos ugu dhaceen, sidoo kale waxaa hoos u dhacay fandenbiyeedyada ay dhallinyarado geysto sannadkii mudo hada sannad ah, ayuu yeri.
Sida uu Bengt Jansson sheegay waxaa maantay jira afartameeyo dhallinyaro ah oo da'dooda u dhaxayso 14- 20- saano jiro oo xeriiro la leh labo koox burcadeed. Bengt ayaa ka digay in ay suurto gal tahay in dhalliyaradaan noqodan kuwa la wareega howla burcad mar hadii kuwii madaxda u ahaa xabsiyada loo dhaadhiceyey. Welwelka kale ee uu Bengt Jonsson qabo ayaa ah in uu dib u biloowdo dagaalkii ka dhaxeeyey labada kooxood oo ay dad badan iskaga dileen. Inkastoo ay hada jirto waxa uu ku tilmaamay Xabad joojin ka dhaxaysa labada kooxood.
- Waxaan malaynayaa in ay jirto xabad joojin, weli kooxaha burcadaa wey jiraan inkastoo surto gal tahay in aysan u dhisnay sidii ay markii hore u dhisnaayeen balse qoysaskii iyo qaraabdii burcada weli wey jiraan. Waxaana jiri kara qatar ah argudasho ay u sameeyaan kooxdii dhib soo gaaray.
Waxay ahayd kowdii bishii Julay sannadkii 2010 markii lagu dilay walaalihii Youkub iyo Edie Mussa kalaab qamaarka kontrobandka ah lagu ciyaaro kuna yaaley xaafada Runna ee Södertälje. Dilkaas oo la tilmaamey in uu kamid ahaa dagaal ka dhaxeeya kooxo Maffio ah oo ka jira degmada Södertälje. Taas oo markii danbe keentay in la qabqabto 20 kamid ahaa labada kooxood midkood uuna ku jiray 31-sanno jir lagu sheegay in uu yahay hogaamiya kooxda burcadaa ee la yiraahdo Södertäljenätverket. Kaas oo uu asbuucii hore lagu xumay xabsi daa'im. Waxse jirta cabsi ah in ragaan la xumukay ka soo maamulaan arimihii burcad xabsiga. Inkastoo uu Bengt ku kalsoonyahay in ay ka hortagi karaan.
Qatarto way jiri kartaa laakiiin waxaan ku rajo weynahay in aan ka hortagi karno ayuu bengt Jonsson oo madax u ah qaybata danbi-baarista booliska Södertälje qaabilsana ka hortaga dhallinyarada qatarta ugu jirta in ay kamid noqoto burcada.